ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासी काठमाडौं ।
सन्दर्भः बिश्व सिओपिडि डे
सिओपिडी के हो? यसबाट कसरी बच्ने ?
आज बिश्व सिओपिडि डे संसारभर बिभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरी मनाइदै छ । नेपालमा पनि यसरोगको बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना भएरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बिशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा आम जनमानसमा उपयोगि केही जानकारी समेटेर यो लेख तयार पारेको छु आशा छ यहाँहरु लाभान्वित हुनुहुनेछ ।
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल नेपालमा सिओपिडीको उपचार गर्ने देशका उत्कृष्ट अस्पतालहरु मध्ये एक हो । सिओपिडी उपचारकालागि आवश्यक सम्पूर्ण पुर्वाधारहरु र अत्याधुनिक उपकरण, दक्ष तथा अनुभवि चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफहरु रहेकाले यस अस्पतालले बिरामीहरुलाई बिश्वस्तरिय सेवा दिन सफल भएको छ ।
(लेखक डा. श्रेष्ठले भारतको नयाँदिल्ली स्थित अल इण्डिया इन्सटिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेजबाट पल्मोनरी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर तथा स्लीप मेडिसिनमा डिएम गरेका छन् । )